အက်ပဲလ်သည် တရုတ်မှ ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခဲ့ပါက သွင်းကုန်ခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ထရန့် ဆို - Yangon Media Group
အက်ပဲလ်သည် တရုတ်မှ ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခဲ့ပါက သွင်းကုန်ခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ထရန့် ဆို
ဝါရှင်တန်၊ ဇူလိုင် ၂၇
အမေရိကန်သမ္မတထရန့်က အက်ပဲလ်ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်မှ တင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းများအား သွင်းကုန်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခြင်းအား ခွင့်ပြုမည် မဟုတ် ကြောင်း၊ သွင်းကုန်ခွန် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းင်းအနေဖြင့် အက်ပဲလ်ကုမ္ပဏီအား လုပ်ငန်းများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းရန် ဖိအား ပေးထားကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
တရုတ်ပြည်တွင် ထုတ်လုပ်သည့် မက်ပရို Mac Pro အစိတ်အပိုင်းများကို တင်သွင်းခဲ့ပါက အက်ပဲလ်အားသွင်းကုန်ခွန်သက် သာခွင့် ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အဆိုပါပစ္စည်းများကို အမေရိကန်၌ ထုတ်လုပ်ပါက အခွန်ကောက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း ထရန့်က ၎င်းင်း၏တွစ်တာတွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။ ထရန့်က အက်ပဲလ်ပစ္စည်းများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း၌ ထုတ်လုပ်စေလိုကြောင်း သတင်းထောက်များကို ပြောကြားလိုက်သည်။
”သူတို့က တရုတ်မှာ စက်ရုံတည်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ကြားပါတယ်။ အဲဒီကထွက်တဲ့ ပစ္စည်း တွေကို အမေရိကန်သို့ တင်ပို့ခဲ့ရင် သွင်းကုန်ခွန် ကောက်ခံသွားမှာပဲ” ဟု ထရန့်က ပြောကြားလိုက်သည်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်တွင် အက်ပဲလ်က အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ထိုစာထဲတွင် ဒေါ်လာ ၆ဝဝဝ တန် မက်စ်ပရို စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာများကို တရုတ်မှ တင်သွင်းရန် ဖော်ပြထားသည်။ တရုတ် ၌ ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်၍ သွင်းကုန်ခွန် ကောက်ခံရလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။
ဤလုပ်ဆောင်မှုမှာ တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့ ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပြဿနာပြေလည်အောင် ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြမည်ဟုဆိုသည်။ ထရန့်က တရုတ်ပစ္စည်းများအပေါ် သွင်းကုန်ခွန်တိုးမြှင့်ရန် ခြိမ်း ခြောက်ခဲ့ပြီး၊ တရုတ်က ပစ္စည်းပို့တင်သွင်းရန်နှင့် အမေရိကန်၏အ ဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ပြောလိုက်သည်။ ထရန့်က အက်ပဲလ် CEO တင်မ်ကွတ်အား လေးစားကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ အက်ပဲလ်ကတက္ကဆပ်မှာ စက်ရုံဆောက်ရန် ကြေညာလိမ့်မည်ဟု မိမိယုံကြည် ကြောင်း ထရန့်က ပြောကြားလိုက်သည်။
Master, Visa, VPI, JCB ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များကို ပြည်တွင်းတွင် ကျပ်ငွေဖြင့် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမထားဟု ဗဟိုဘဏ် ထုတ်ပြန်
သတ်မှတ်ရက် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု မရှိသည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခု ဇူလိုင်လကုန် နောက်ဆုံးထား ဒဏ်ကြေးပေးသွင်းရမည်
မုတ်သုံလေ အလွန် အားကောင်းလာသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း မိုးထစ်ချုန်း ရွာသွန်း၊ ပြည်နယ်နှင
ကမ္ဘောဒီးယား ရွေးကောက်ပွဲကို ချို့ယွင်းချက်များ ရှိနေသော ရွေးကောက်ပွဲဟု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ ??
စစ်မှု မထမ်းမနေရ ကာလကို တောင်ကိုရီးယား လျှော့မည်
ပရီးမီးယားလိဂ်ငွေကြေး အကျိုးအမြတ်တွင် ချန်ပီယံ မန်စီးတီးထက် လီဗာပူးပိုရ၊ ဒုတိယဖြင့် ထပ်မ??